'Waggoota 3 mana hidhaatti, harka caalaa mana dukkanaa keessan ture' - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Sarbamiinsa mirga namoomaa naannoo somaalee hammata dha jedhame
Humnoonni nageenyaa fi hooggantootni manneen hidhaa naannoo Somaalee mana hidhaa Ogaadeen keessatti namoota hidhaa fi hiraarsaa akka jiran ''Human Rights Watch'' beeksise.
Ministirri Muummee Dr. Abiyyi Ahimad atattamaan qorannoon akka gaggeeffamu fi qaamoleen nageenyaa naannoo fi qondaaltotni harka keessaa qaban attattamaan seeratti akka dhiyaatan ajajuu qabus jedheera gabaasni dhaabbatichaa.
Gabaasni fuula 88 qabuufi sarbamiinsa mirgoota namoomaa man hidhaa Ogaadeen, naannoo Somaalee keessatti argamu irratti xiyyeeffatu kun hidhamtootni, waldhaansa fayyaa, maatii fi abookaattoo isaanii argachuuf rakkachuun caalatti, dirqiin gudeedamuu dabalatee dararaa garaa garaaf saaxilmuu eerera.
Yakka kana keessatti hooggantootni manneen hidhaa fi poolisiin addaa Somaalee qooda qabaachuus gabaasichi eereera.
Itti gaafatamummaan isaanii pireezidantii naannichaaf ta'uus ibsa.
Akka gabaasa kanaatti hidhamtootni kunniin Adda Bilisummaa Biyyoolessaa Ogaadeen (ONLF) waliin hidhata qabdu jedhamuun dararaaf saaxilaman.
Ministirri Muummee Itoophiyaa haaraan, humnoonni tikaa biyyattii lammiilee isaanii dararaa turuu amananiis, aadaa dararaa dhaabuun, humnootni tikaa gocha isaaniif akka ittigaafataman gochuu hojii hafuudha'' jedhan Human Rights Watch'tti qorataa gameessi Afrikaa Feliiks hoorne.
Itti dabaluunis, ''haalli sukanneessaan mana hidhaa Ogadeen keessa jiru gochoota pireezidantii naannichaa, hooggantoota olaanoo naannichaa fi Poolisii addaa Somaaleerratti qorannoo attattamaafi ifa taasifamuu qaba,'' jedhaniiru.
Dhaabbatni 'Human Rights Watch' erga bara 2011 hanga ammaatti haala qabiinsa mirga namoomaa naannichaa qorachuuf miseensota humna nageenyaa, qondaaltota mootummaa fi hidhamtoota duraanii 70 dabalatee namoota 100 waliin gaaffiifi deebii taasiseera.
''Waggoota sadii mana hidhaa keessa turetti harka caala kophaa koon mana dukkanaa keessa ture'' jedha hidhamaan duraanii tokko.
Goodayyaa suuraa Mana hidhaa Ogaadenitti sarbamiinsi mirga namoomaa jiru hammaataadha
''Galgalaan allatti baafama sanuu dararamuuf. Warri mana hidhaa waan hedduu na godhan. Cidhaan koo elektirikaan gubaniiru, funyoo itti hidhanii bishaan qaruuraatti irratti rarraasaniiru, mataa kootti barbaree firfirsaniiru. Akkan hin iyyineefis afaan koo cuqqaalu ture'' Jedha.
Hidhamtootni dhaabbata kanatti akka himanitti bakka hidhamtootni kaanis argamanitti qullaa isaanii reebamuun akka qaana'aniifi boohan taasifamu.
''Yeroo ta'e bakka namni hundi argametti qullaa dhoqqee keessatti na gangalchaa uleen na reebaan'' jedha gaheessi waggaa 40, Hodaan. Osoo hin himatamiinis waggaa shaniif hidhamuu hime.
Akka hidhamtootni kun jedhanitti poolisii addaa somaalee dabalatee hooggantootni manneen hidhaa reebicha, dirqiin gudeeduu, nyaata dhowwachuu ajajuu dabalatee keessattis kallattiin akka hirmaatan himaru.
Daa'imman hedduun mana hidhaa Ogaadeen keessatti akka dhalataniifi gariin isaanii gocha dirqisiisanii gudeeduu eegdotni mana hidhichaa raawwataniin akka ta'ees beekameera.
Dubartootni mana hidhaa san keessatti daahan waldhaansa fayyaa miti bishaanillee akka hin argannee himan.
Miidhamtoonni maal jedhan?
Halkan achitti na fuudhanii kaasee ji'a shaniif miidhaan qaama narra gahaa ture.
Yeroo achi geenyu wayyaa jalatti uuffadheettiin alatti hundumaa narraa baasanii ji'oota shaniif na dhaanaa turani.
Achii, kutaa adabbii baayyee xiqqoo keessa dhaabbachuufi taa'uu hin dandeenye keessatti natti cufani.
Dhugaa dubbachuuf, gidiraan ani arge baayyee dha. Lafti kutichaa simintoo waan taheef rafuu hin dandeessu, kanarratti halkan sa'aatii torbattii bishaan sitti darbatu.
Baatii shaniif, na reebuuf jecha halkan keessa kutaa kootii na fudhatu.
Yeroo kaana immoo aduu saafaan gad-na baasanii lafarra na ciibsu. Ammas na reebu, bishaan keessa na buusu. Jigjigaan immoo sa'aa saddeet itti baayyee qorriti.
''Halkan guutuu bishaan qorraa keessatti ergan dabarssee booda, gara kutichaatti si deebisu ach keessatti deemuufi dhaabbachuu hin dandeessu rafuu qabda.
Yeroo tokko tokko dararaan narra ga'e hundi abjuu kootti natti dhufa.
Tasa waraana nurratti bananii,haadhakoo,obboleettiikoo fi obboleessakoo quxisuu bakka tokkotti ajjesan.
Kanan yaadadhu keessaa harkaa fi miila koo erga duubatti hidhanii booda eela bishaanii keesssatti qullaakoo hanga hafuurri koo addan citutti na ukkamsuu isaaniiti.
Ani miseensa Adda Bilisummaa Ogaadeen jettee akkati amantu wayita barbaadan ammo dararaa sitti cimsu.